“Chawo Chawo Wayyanee” Xumura Gabrummaa! « QEERROO
“Chawo Chawo Wayyanee” Xumura Gabrummaa!
Gootota ilmaan Oromoo Qeerroo Bilisummaa
Godina Wallaggaa Angar Guttiin!
« Irreecha Wallagga Madiitti Guyyaa Kaleessaa Kabajame
Xumura Gabrummaa!!! Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!! »